ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်ဂလဲ့စား – CHAR TAKE
အား……ကျွတ်…..ကျွတ်….အိ…အီး အင့်……အင့်……အ…..ပြန်ထုတ်ပါ မလုပ်ပါနဲ့…..အ…..တော်ပါတော့….. တောင်းပန်ပါတယ်…..ကျွန်မကိုသနားပါ ဟားဟားဟားဟား…..ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ထောင်ချတုန်းက ကျေနပ်နေတာလေကျုပ်မလုပ်ပဲ မတရားခံလိုက်ရတာ ဒီနေ့ကို ကျုပ်စောင့်နေတာကြာပြီ ။ ခင်ဗျားကိုကလဲ့စား ချေဖို့ မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားလို တရားသူကြီးအဖို့သိစေရမယ် ။
ကဲ…..ရော့….အင့်…..ရှီး……တောကအ…..အ ……ဖွတ်…..ဗွတ်…..ဗွတ်ဗြစ်……ဗြွတ် …..ပြွတ်….ပြွတ်…….ဘွတ် အား….အမလေး… သေပါပြီ…နာတယ်….အ…အင့်…ဟင့်.. ..အင့် ဟား…ား…..ခင်ဗျားစောက်ဖုတ်က အင့်….အင့်….လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ ။ ခင်ဗျားစောက်ဖုတ်က စီးနေတာပဲ…အားဟား….နင်….နင် …လူယုတ်မာ….ငါ့ကို….အ..အ…မုဒိမ်းကျင့်တာ။နင်တနေ့……ပြန်ခံစားစေရမယ်…..နင့်ကိုအား…..ပြန်ပြီးထောင်ချမယ်….အအင့် …အင့်…ဟင့်….ဟင့်….ပြွတ်ပြွတ်ဗြစ်…ဗြုတ်….ဗြုတ်…ဖွတ် ….ဘွတ်..ဘွတ်….အား… ,ပြီးတော့မယ်…..ပြီးတော့မယ်…..ပြီးပြီ…ပြီးပြီ……အား
ကျုပ်လရေတွေယူစမ်း…ကျုပ်မျိုးစေ့သုတ်ရည်တွေခင်ဗျားသားအိမ်ထဲပန်းထည့်ပြီ….ရော့…ရော့ဗြစ်….ဗြစ်…ဗြစ်…..ဗြစ်…..ဟားအား……မလုပ်နဲ့….ပြန်ထုတ်ပါ…အားမထည့်နဲ့…….မထည့်နဲ့ ….မယုတ်မာနဲ့ ယူစမ်း ကျုပ်လရေတွေ…ဗိုက်ကြီးစမ်း…ဗိုက်ကြီးစမ်း…….ကလေးမွေးစမ်း…..အား…….အား….ဟား………ဟင့်ဟင့်…အီး…အဟင့်….အီးဟီး ငိုမနေနဲ့…ခင်ဗျားကို ကျုပ်အသနားခံတုန်းက ခင်ဗျား ရက်စက်ခဲ့တာလေ။အင့်ဟင့်ဟင့်……ဟီး..အီး…. ခင်ဗျားကလာဘ်စားပြီးကျုပ်ကိုထောင်ချတယ်။ခင်ဗျားဘာငြင်းချင်လဲ။
အခုကျုပ်ရဲ့မျိုးစေ့သုတ်ရည်တွေခင်ဗျားသားအိမ်ထဲဝင်သွားပြီ။သေချာအောင်ခင်ဗျားကို ထပ်ပြီးဇီးတင်ပေးမယ်။မျိုးစပ်ပေးမယ်။ကျုပ်သုတ်ရည်တွေခင်ဗျားသားအိမ်ထဲထပ်ဖြည့်မယ်။ လာစမ်း…ခင်ဗျားလိုဖင်ကြီးကြီးနို့အုံကားကားနဲ့တရားသူကြီးမကို ကျုပ်ကထပ်ပြီး ဗိုက်ကြီးအောင်လိုးပေးမယ်။ မလုပ်ပါနဲ့……မလုပ်ပါနဲ့…..တောင်းပန်ပါတယ်…….ရှိခိုးပါတယ်….မလုပ်ပါနဲ့ အား…….အမရေ….ကယ်ပါဦး…အား …
ကျုပ်နာမည်က စိုးမောင်…ကျုပ်ကတစ်ကောင်ကြွက် ကြုံရာကျပန်းလုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းကားမောင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့ ကျုပ်ကံဆိုးဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ ကားအားလား…..ဟုတ်ကဲ့…ဘယ်သွားမလဲခင်ဗျာ……စမ်းချောင်းကိုနှစ်ထောင့်ငါးရာတော့ပေးဗျာ….နှစ်ထောင်မရဘူးလား…. .ကဲ …တက်ဗျာအမျိုးသမီးကအနဲငယ်မူးနေဟန်ရှိတယ် ။ လှတော့လှသာဗျ ။ ဒီမှာခင်ဗျ…ရောက်ပါပြီဪရောက်ပြီလား…ကျွန်မကိုတွဲပို့ပါဦး…ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုနီးသွားတော့ကျုပ်ရင်တွေခုန်လာတယ်။ကျုပ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းပြီးတိုက်ခန်းကိုပို့ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပါရှင်….ရှင့်မှာလိပ်စာကဒ်ရှိလား…ရှိတယ်….ကျွန်မကိုပေးခဲ့ပါ…လိုတဲ့အခါခေါ်လို့ရအောင်ရှင့်ကိုစိတ်ချသွားပြီ…..ကျေးဇူးပါဗျာ….လိုရင်ခေါ်လိုက်ပါ။
ကျုပ်လိပ်စာကဒ်ပေးခဲ့ပြီးပြန်လာလိုက်တယ်။သူ့နာမည်က ခင်မမတဲ့ဗျ။နောက်ရက်တွေကျသူသွားချင်တဲ့နေရာရှိရင်ကျုပ်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲ။ကျုပ်အတွက်ကရသင့်တာထက်ပိုရတာပေါ့ဗျာ။သူမနဲ့ကျုပ်လဲအတော်လေးရင်းနှီးလာတယ်။ တစ်ရက်သူမ ကျုပ်ကိုရင်ဖွင့်လာတယ်။သူ့ယောက်ျားက သူ့ကွယ်ရာမှာ ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဘာညာပေါ့။ တစ်ရက်သူမတိုက်ခန်းပြန်ပို့ပြီးတဲ့အခါထိုင်ပါဦးကိုစိုး…..ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအကူအညီတခု တောင်းချင်လို့ပြောပါခင်မ ကျွန်မနဲ့အတူအိပ်ပေးပါလား ဗျာ…….မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ……ခင်မမှာကာမပိုင် ယောက်ျားရှိတယ် ။ ကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ရှင် စဉ်းစားပါ ကျွန်မလိုလုံးကြီးပေါက်လှမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အတူအိပ်ဖို့ဘယ်ယောက်ျားမှမငြင်းဘူးရှင်ကငြင်းရင်တော့နောင်တရနေလိမ့်မယ်.ကျုပ်မလုပ်နိုင်တာနားလည်ပေးပါ……ရှင်သေချာစဉ်းစားနော်ဟုတ်တယ်…..ကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်ကအရူးပဲ..နောက်မှနောင်တမရနဲ့နော်…….ခင်မပြောချင်တာဒါပဲမလားကျုပ်ပြန်လိုက်ဦးမယ်။ကားပြန်အပ်ဖို့အချိန်နီးနေပြီ…..ခွင့်ပြုပါဦး
ကျုပ်စိတ်ထဲအတော်လေးညစ်သွားတယ်။ကျုပ်ခင်မကိုငြင်းခဲ့တာ။ယောကျာ်းပဲ မိန်းမလှလှတစ်ယောက်နဲ့ အတူအိပ်ရမှာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်စိတ်ကို နိုင်အောင်ထိန်းတယ်။ ကျုပ်ကို ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျုပ်ဘကြီးက ကံငါးပါးလုံဖို့ အမြဲဆုံးမတယ်။ကျုပ် ဒုသနသောကံမထိုက်ချင်ဘူး။ကျုပ်စိတ်တွေလေးလံပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ပြီးအိပ်ယာဝင်ခဲ့တယ်။ ကိုစိုးမောင်….ကိုစိုးမောင်…ဒေါက်..ဒေါက် ခင်ဗျာ….လာပါပြီ ဟင်……ရဲတွေ….ဘာကိစ္စရှိလို့လဲခင်ဗျာ သူ…သူပဲ…ကျွန်မကိုညကမုဒိမ်းကျင့်သွားတာ။ဟာ…မဟုတ်ဘူး…ကျုပ်မလုပ်ဘူး ကဲ….ကဲ….စခန်းမှာရှင်းပါ။ဆရာကြီးသူ့ကိုလက်ထိပ်ခတ်လိုက်……..ဟာ…မဟုတ်ဘူး ကျုပ် ကျုပ်မလုပ်ဘူး ။ ကျုပ်ဘယ်လိုရှင်းပြလို့မရတော့ဘူး ခင်မမ လှည့်ကွက်တွေပေါ့ဗျာ ကျုပ်ခေါင်းထဲမှာ ခင်မမရဲ့စကားတွေပြန်ကြားလာတယ်။ ရှင်နောင်တမရစေနဲ့နော်တဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ကျုပ်မုဒိမ်းမှုနဲ့ ထောင်ကျသွားတယ် ။ ကျုပ်ရင်ထဲမှာဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကို ကလဲ့စားချေဖို့ တေးမှတ်ထားလိုက်တယ် ။ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့ ရက်တွေတိုင်းဒီမိန်းမ နှစ်ယောက်ကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် သတိရနေတယ်။ ထောင်ထဲမှာကလူစုံတယ်။ကျုပ်ပညာ တွေအသိတွေရလိုက်တယ် ။ ကောင်းတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ထောင်ထဲကဖာခေါင်းတွေရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ ကျုပ်လီးကိုဂေါ်လီနဂါးပတ်ထည့်လိုက်တယ်။လီးကြီးရှည်ဖို့လေ့ကျင့် ခန်းတွေလုပ်တယ်။အဲဒါကကတော့တကယ့်အမှန်ကိုမမြင်ပဲ မုဒိမ်းကျင့်တာလို့ ဆွဲချက်တင်တိုင်းထောင်တန်းချပစ်တဲ့ တရားသူကြီးမအတွက်ပဲ။ပြောသာပြောတာဒီမိန်းမလဲ အကိတ်ကြီးပဲ။ ဖင်ကားကား ရင်အုံကြီးကြီးနဲ့ ထန်မယ့်ပုံပဲ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်သုံးနှစ်လောက် ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်လိုက်ရတယ် ။ အဲနောက်ပိုင်း သမ္မတကြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့လွတ်လာခဲ့တယ် ။ ကျုပ်ထောင်ကလွတ်တာနဲ့ ဒီမိန်းမတွေကို လိုက်ရှာခဲ့တယ် ။ ကျုပ်လဲလူမိုက်နီးနီးဖြစ်လာတယ်။ ရက်စက်တတ်လာတယ်။
တနေ့တော့ ကျုပ်ကိုထောင်ချခဲ့တဲ့တရားသူကြီးမရှိတဲ့နေရာကိုသိရတယ်။ဟိုမိန်းမကိုတော့ရှာစရာမလိုတော့ဘူး။သူ့စရိတ်နဲ့သူသွားပြီ။သူ့လင်ကကွယ်ရာဖောက်ပြန်တာသိတော့သူ့လင်ကသတ်လိုက်တယ်ဆိုပဲ။ကျုပ်လုပ်ရမှာကတစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ တရားသူကြီးမက အိမ်ဖော်ကောင်မလေးနဲ့နေတာ။ ကျုပ်လဲ ဒီရက်ထဲ ဂွင်းမတိုက်ပဲထားတယ်။ တရားသူကြီးမကို ဗိုက်ကြီးခိုင်းမယ်။ကျုပ်ရဲ့ကလေးမွေးခိုင်းမယ်။ ကျုပ်အတော်လေး အချိန်ယူပြီးစောင့် လိုက်ရတယ်။ ကျုပ်လိုချင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီ ။ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးသူ့အမေဆုံးလို့ရွာပြန်သွားတယ် ။ အိမ်မှာတရားသူကြီးမ တစ်ယောက်ထဲ။ကျုပ်အိမ်ထဲမှာကြိုပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။ဟော အိမ်ရှေ့က ကားသံကြားတယ်။ ဒင်းရောက်ပြီ။အိမ်မှာသူတယောက်ထဲရှိတယ်အထင်နဲ့ဖရီးနေနေတယ်။ရေချိုးတော့အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ချိုးတယ်။
ဖင်သားကြီးတွေကဖွေးဥနေတာပဲ။စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲဖောင်းအိပြီးအမွေးမရှိဘူး။နို့အုံကြီးကလဲလုံးအိနေတာပဲ။ကြည့်ရင်းနဲ့ကျုပ်လီးတောင်လာတယ်။စောင့်လိုက်ဦးမယ်လေ။ရေချိုးပြီးတော့အိပ်ခန်းထဲဝင်လာပြီးမှန်တင်ခုံရှေ့မှာဖီးလိမ်းပြင်ဆင်နေတာပေါ့။အဲအချိန်မှာပဲ… ဟင်…ရှင်….ရှင်…ဘယ်သူလဲ ဟားဟားဟားဟား……ခင်ဗျားကျုပ်ကိုမမှတ်မိဘူးလား….အဲဒါဆိုလဲပြောပြရတာပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်ကခင်ဗျားမုဒိမ်းမှုနဲ့ထောင်ချလိုက်တာ။ကျုပ်ကမတရားခံရတာ။အဲဒီအမှုကိုကျုပ်မကျူးလွန်ဘူး။အေး….ဒီနေ့တော့ မုဒိမ်းကောင်ရဲ့သရုပ်ကိုခင်ဗျားကိုပြမယ်….ဟားဟားဟင်…ရှင်…ရှင်…ဟို….ဟို ဘယ်လိုလဲ….သိပ်ကြောက်သွားပြီလားဒီမှာကြည့် စမ်း…..ခင်ဗျားကိုအကောင်းဆုံး အရသာတွေပေးဖို့ကျုပ်မှာပြင်ဆင်ထားရတာ။
အမလေး…မလုပ်ပါနဲ့ရှင်….ကျွန်မမှားပါတယ် ။ မရဘူးလေ…ခင်ဗျားကြောင့် ကျုပ်ရဲ့သိက္ခာတွေမြောင်းထဲရောက်သွားပြီ ။ ဒီညတော့ အဲဒီအတွက်ပြန်ပေးဆပ်ရမယ် ။ ရှင်….ရှင် ရှေ့မတိုးနဲ့နော်…ကျွန်မရဲခေါ်လိုက်မှာ….မလာနဲ့နော်…….လာကြပါဦး ။ လာကြပါဦးရှင်..ဟားဟားဟားဟား အော်စမ်းပါ…..ကြိုက်သလောက်အော် ခင်ဗျားတို့ရပ်ကွက်ကအငြိမ်ပဲ။ ရှင်…..မလုပ်ပါနဲ့ရှင်…….ဘာလိုချင်လဲ လိုချင်တာယူသွားပါ…..ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ် ကျုပ်လိုချင်တာက ခင်ဗျားပဲ။ ခင်ဗျားဗိုက်ထဲကိုကျုပ်လရေသွင်းရမှကျေနပ်မယ်။ခင်ဗျားကိုဗိုက်ကြီးတဲ့အထိလိုးမယ်။ဒီစနေတနဂ်နွေကရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့အတော်ပဲ။ခင်ဗျား အတွက်ဗိုက်ကြီးဖို့အချိန်လုံလောက်ပါတယ်လေ…
ရှင်…ရှင်…မယုတ်မာနဲနော် …..အား….အား….အမေရေကယ်ကြပါဦး….ကယ်ကြပါဦးရှင် အာ…..စောက်ကောင်မ နားငြီးလိုက်တာဖြန်း…ဖြန်း…ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်အီး….ဟီး…ဟီးဟင့်ဟင့် တောက်ဘယ်လောက်တောင် လာဘ်စားထဲလဲမသိဘူး…နို့လုံးတွေဖင်လုံးတွေက အကြီးကြီးတွေပဲ စိတ်ချ…ဗိုက်ကြီးရမှာပါ ။ မပူနဲ့ကျုပ်သုတ်ရည်နဲ့ ခင်ဗျားဗိုက်ကြီးစေရမယ်…ခင်ဗျားကို ဗိုက်မကြီးကြီးအောင်လိုးပေးမယ်….ကျုပ်လရေတွေထည့်ပေးမယ်…လာထားအား…. အရင်ဆုံး လက်တွေကိုကြိုးတုပ်ထားပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲတင်ထားလိုက်။ လူရည်သန့်အတန်းစားတွေဆိုတော့ကိုယ်လုံးကမွှေးနေတာပဲ။ကျုပ်လဲရမက်စိတ်ထန်လာပြီဆိုတော့စပြီးကိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။တရားသူကြီးမကိုလိုးရမှာဆိုတော့ လီးကအပြတ်တောင်နေတော့တာ။နို့လုံးကြီးတွေကိုဖွဖွနယ်ပြီးစောက်ဖုတ်ကြီးကိုအုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။
ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ……ကျုပ်မရက်စက်ချင်ဘူး။ အသားအနာမခံချင်စမ်းပါနဲ့ အင့်……ဟင့်…ရွှတ်…..အာ…..နှပ်တွေထွက်နေပြီ…မလှပဲနေဦးမယ်။ အား……ကောင်းလိုက်တာ….နို့ကြီးတွေကအိနေတာပဲ ။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ဖောင်းအိနေတာပဲ ။ ကျုပ်လီးကိုခင်ဗျားစွဲသွားစေရမယ် ။ ဒီအတွက်နဲ့ကျုပ်ကြိုးစင်တက်ရမယ်ဆိုလဲကျေနပ်တယ်။ အဖုတ်ကိုစပြီးပင့်ယက်လိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုစုပ်ပစ်လိုက်ပြီးအစိလေးကိုထိုးကလော်ပေးလိုက်တယ်။အတွင်းသားရဲရဲလေးတွေကိုလျှာနဲ့ပင့်ကော်ပြီးစုပ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့ ဘာဂျာအစွမ်းမှာတရားသူကြီးမကော့ပျံလန်နေတော့တယ်။
အား…..ဟား……မလုပ်ပါနဲ့ပလပ်….ပြွတ်….ပြွတ်…ပလပ်..ပလပ်အား…အိ…အိ…တော်ပါတော့ရှင်ဟင့်…အမေရေ … သေရပါတော့မယ် ဘယ်လိုလဲသိပ်ကောင်းနေပြီမလား ပလပ်…ပလပ်…ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အား…အိ….အိ…အင့်…ဟင်းအား…အား…..ရှီး…..ပြွတ်ပြွတ် ကျုပ်လဲယက်ကောင်းကောင်းနဲ့ယက်ပစ်လိုက်တာစောက်ဖုတ်ထဲကအရည်တွေတမံကျိုးသလိုဝေါကနဲကျလာတယ်။တရားသူကြီးမပြီးသွားပြီ။ကျုပ်ဘာဂျာအစွမ်းမှာပျော့ကျသွားပြီစိတ်ကြိုက်ဂျာပြီးတာနဲ့ကျုပ်လိုးလို့ရအောင်ချောဆီတွေကအဆမတန်ထွက်နေပြီ။လီးကိုစောက်ဖုတ်မှာတေ့ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။
ပြွတ်… ပြွိ….ပြိ…ပြိ….အား……..နာတယ်…နာတယ်… နာရင်မရုန်းနဲ့လေ….ခင်ဗျားရုန်းနေတော့ လီးကိုနှဲ့သွင်းပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ စောက်ဖုတ်အုံကြီးပေမယ့် တကယ်တမ်းလိုးသွင်းတဲ့ အခါကြပ်နေတယ် ။ လီးဒစ်ဝင်သွားတာနဲ့ အတွင်းသားတွေက ရစ်ပတ်စုပ်ညှစ်ယူတော့တယ်။ အဟင့်..ဟင့်…အီး….ဟီး…ဟီးဗြစ် …ပြိပြိ…ဗြွတ်…..ပြွတ်အ…..အ…..အမလေး…..အမေရေဟင့်…ဟင်း…….အိ…..အိအား…..ဟား…….ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျားစောက်ဖုတ်ကညှစ်အားအတော်ကောင်းတာပဲ….ညှစ်စမ်း….ညှစ်စမ်းအား…အား……ဟား…..ရှီး…..တောကကျုပ်ဆွထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် လီးကိုစောက်ဖုတ်က အတင်းဆွဲညှစ်နေတယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ ။ကျုပ်လဲဆက်ပြီးတောင့်မခံနိုင်တော့တာနဲ့ လီးတဆုံးဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တယ် ။ သားအိမ်ကို ဒုတ်ဒုတ်ထိပြေးဆောင့်တာ လီးထိပ်လဲ ကျိန်းသွားတယ် ။ ကျုပ်လီးကဂေါ်လီရဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားနေရရှာတယ်။ စောက်ဖုတ်နံရံတွေကို ဂေါ်လီကချိတ်ဆွဲနေတဲ့ အရသာကို ခံစားနေရတယ် ။ မျက်နှာလေးက ပန်းဆီရောင်သမ်းပြီး အံကြိတ်ပြီး တဟင်းဟင်းဖြစ်နေတယ် ။ မျက်ရည်စလေးတွေခိုနေတယ်။ ကျုပ်လဲနဲနဲတော့သနားမိသွားတယ်။
ဗြစ်..ဒုတ်…အမေ့…. သေပါပီ…အား…အား…နာတယ် …နာတယ်ဗြစ်….ဗြစ်….ဗြွတ်…ဗြွတ်…ပြွတ်…စွပ်..စွိ အ….အ…..အင့် ……သေပြီ….သေပြီဖြေးဖြေးလုပ်ပါရှင့်…..အား….အောင့်တယ် ….အောင့်တယ်…..အမေ့..အင့်အား…….ဗြုတ်….ဗြုတ်….ပြွတ်….ဗြစ်အား…ရှီး….တောက်…ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်…. လီးကိုညှစ်ထားတာများစီးပိုင်နေတာပဲ….အား….ဟား… အချက် ငါးဆယ်ကျော်လောက်ပဲ ဆောင့်လိုးနိုင်တယ်။စောက်ဖုတ်ကအတွင်းထဲကို ညှစ်စုပ်သွင်းယူနေတဲ့ ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူး။လရေထွက်ချင်လာပြီ။
အား..မရတော့ဘူးပြီးပြီ ကျုပ်လရေတွေယူစမ်းဗိုက်ကြီးစမ်း…ရော့..ရော့ကျုပ်လရေတွေခင်ဗျားသားအိမ်ထဲအထိသွင်းလိုက်ပြီ။ မလုပ်ပါနဲ့……မထည့်ပါနဲ့…..အားရော့….ရော့….အား…..ထွက်ပြီ..အားများလိုက်တဲ့လရေတွေ….အား… နောက်ဆုံးတစ်ချက်အားကုန်ဆောင့်လိုးပြီးလီးကိုသားအိမ်ထဲ အထိစိုက်သွင်းပြီး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်လဲလီးစွပ်ရက်နဲ့ဖက်ပြီးမှိန်းနေလိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျုပ်ကျေနပ်တယ်။အောက်ကတော့တသိမ့်သိမ့်နဲ့ငိုနေရှာတယ်။ သနားဖို့တော့အကောင်းသား။ဒါပေမယ့်ကျုပ်ဘဝပျက်အောင်လုပ်ခဲ့တာပဲ။နို့အုံကိုစိတ်တိုင်းကျဆုပ်နယ်ပြီးနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေပေးနေတယ်။
သုတ်ရည်ထွက်ပြီးနဲနဲပျော့နေပေမယ့် နူးညံ့တဲ့စောက်ဖုတ် အတွင်းသားတွေရဲ့ တရွရွနဲ့စုပ်ညှစ်နေမှုကြောင့် ခဏအတွင်းကျုပ်လီးတောင်လာရတယ် ။ ဒါကိုသတိထားမိသွားတယ် ထင်တယ် ။ ကျုပ်ရင်ခွင်ထဲက ရုန်းထွက်တယ်။စောက်ဖုတ်ထဲကလီးကျွတ်လုခါနီးမှာကျုပ်အားရပါးရ တဆုံးလိုးသွင်းပြီးပန်းထည့်ထားတဲ့သုတ်ရည်တွေပြန်အံကျလာတယ် ။ များလိုက်တဲ့သုတ်ရည်တွေပျစ်ခဲနေတာပဲ။သားအိမ်ထဲမှာပြည့်လျှံပြီးအပြင်ကိုအံကျလာတယ်။ကျုပ်လဲပြန်ေ ဆာင့်ဆွဲပြီးလီးတဆုံးဆောင့်သွင်းလိုးပစ်လိုက်တယ်။
ဖုတ်…ဖွတ်…..အင့်…အ….အ……ဖွတ်..ဗစ်…ဗြစ်..အီး…ဗွတ်ဘွတ်ဘွတ် အတော်…တော်ပါတော့ … အ …အ…ဗြွတ်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ…ရှင်အားရအောင်လုပ်ပြီးပြီပဲ. .. အင့်….အင့်. ..လွှတ်ပါတော့…ပြွတ်…စွိ…ပြိ…ပြိ အို. …….အား………ဟား….သူ့ဟာကြီးကလဲမာတောင့်နေတာပဲအို..အိအိ ဘယ်ကလွှတ်ရဦးမလဲ..လိုးဦးမှာအား…ခင်ဗျား ဗိုက်ကြီးတဲ့အထိကျုပ်လိုးမှာ…ကျုပ်လီးအပြတ်တောင်နေပြီ….ခင်ဗျားစောက်ဖုတ်ထဲအပြည့်ပဲ အား…..ကောင်းလိုက်တာ….ကျုပ်လရေတွေခင်ဗျားဗိုက်ထဲထပ်ဖြည့်ပေးရဦးမယ်…အဟင့်…အီး..ဟီး..ရှင်အငြိုးတွေကျေပေးပါ…ကျွန်မ အုဖလု..အွန့်အင့်
စကားတွေများလွန်းတယ်။ကျုပ်သူ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုစုပ်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားတယ်။ကျူပ်ရဲ့ဂေါ်လီလီးဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းမြည်းစမ်းပြီးပြီဆိုတော့ သူလန့်နေရှာမှာပေါ့။မျက်လုံးအဝိုင်းသားလေးနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်နေရှာတယ်။ကျုပ်ရင်ထဲမှာ အမျိုးအမည်ဖော်မပြတတ်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ကျုပ်လဲအဲဒီတစ်ညလုံးမနားတမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ရုံးပိတ်ရက်နှစ်ရက်လုံးအိမ်အပြင်ပေးမထွက်စေပဲ ပုံစံမျိုးနဲ့လိုးပစ်လိုက်တယ်။သုတ်ရည်တွေဆိုတာအိုင်ထွန်းနေတာပဲ။နောက်တော့ကျုပ်ကိုမရုန်းတော့ဘူး။
သူမကိုမုဒိမ်းကျင့်တာ တစ်လပြည့်တဲ့အခါ ကျုပ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုတွေပြောင်းလဲလာတယ် ။ လိုးခါနီးချုပ်နှောင်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။တစ်ညကိုနှစ်ချီသုံးချီလောက်ကို မျော့သွားအောင်အားရပါးရလိုးပစ်လိုက်တယ် ။ သူမကတော့အကြိမ်ကြိမ်ပြီးရတာပေါ့။ပြီးတာနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဖက်ပြီးအနားယူ။ မနက်မိုးလင်းတော့ကျုပ်အတွက်မနက်စာအဆင်သင့် ပြင်ပေးထားပြီးသား။အမယ်…ကြက်ဥနဲ့နို့တောင်ပါသေး။ကျုပ်လဲကလဲ့စားချေချင်တဲ့စိတ်တွေပြောင်းလာပြီးသူမကိုချစ်တဲ့စိတ်ကအစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။
နှင်း…ရှင်…ကိုယ်နှင်းကို ချစ်နေမိပြီနှင်းကရော…ကိုယ့်ကို မုန်းနေတုန်းပဲလား…အင်း…ဟင်…ခိခိခိခိ နှင်းအမှန်အတိုင်း ဖြေရမှလားအင်းပေါ့..တကယ်တော့ အစကနှင်း သူ့ကိုအရမ်းမုန်းတယ်။အားမတန်တော့လဲ သူအနိုင်ကျင့်သမျှခံရတာပဲလေ။ တရားစွဲမယ်ထောင်ချပစ်မယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်ရင် နှင်းဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းမယ်။ နှင်းမှာ အတော်စဉ်းစားရပါတယ် ။ အဲဒီရက်တွေမှာနှင်းအတွက် ငရဲလိုပါပဲ။ပြီးတော့သူက တစ်ပတ်တစ်ခါလာပြီး အတင်းကျင့်နေတော့ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ် ။ နှင်းလေ ကိုယ့်ကိုသတ်သေဖို့ကြိုးစားမိသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှင်းမသေရဲပြန်ဘူး။နောက်တော့ သူ့ ကိုချော့ပြီး တာဝန်ယူခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။နောက်ပြီး နှင်းနှင်းလေ…ဟို…ဟို…သူ့ရဲ့အပြုစုယုယတွေကို သာယာနေမိပြီ။သူမလာတဲ့နေ့တွေဆိုရူးမတတ်ပဲ။နှင်းသူအလာကိုပဲမျှော်နေမိတယ်။
သူလာရင်နှင်းရင်တွေ အရမ်းခုန်တာပဲ ။ အခုတော့နှင်းဘဝမှာတခါမှမခံစားဖူးတာတွေကို သူကခံစားတတ်အောင် လုပ်ပေးတယ်လေ ။ နှင်းလေ နှင်း သူ့ကိုစွဲနေပြီသိလားအင်း…ကိုယ်လဲအစကတော့ နှင်းအပေါ်ကလဲ့စားချေချင်တဲ့စိတ်ကပြင်းထန်နေတာ ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ နှင်းကိုကလဲ့စားချေချင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်လာပြီး နှင်းကိုချစ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။နှင်းလေ……သူ့အမှုကိုစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့နေ့မှာအ ရမ်းတုန်လှုပ်သွားတယ်။ သူထင်သလိုနှင်းလာဘ်မစားရပါဘူး။နှင်းလေမုဒိမ်းသမားတွေဆိုအရမ်းရွံတယ်။ဒါပေမယ့်သူနဲ့တွေ့မှနှင်းစိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်နိုင်တယ် ။ အဲဒီအမျိုးသမီးကပြီးမှနှင်းကိုပြောပြတာ ပါ။ ဒါပေမယ့်လွန်သွားပြီလေ။သူပြောပြချက်ကြောင့်နှင်းသူ့အပေါ်လေးစားမိတယ်။သူကယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာလေ။ဒါကြောင့်သူ့ကို နှင်းကိုတာဝန်ယူဖို့ပြောကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတာ။
နှင်းရယ်…တကယ်လို့ ကိုယ်ကတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်ရော…အဲလိုဆိုလဲနှင်းရဲ့ကံပေါ့….ကိုယ်ဝန်ရသွားခဲ့ရင်လဲကလေးကို ရအောင်မွေးရမှာပါ ။နှင်းအတွက်တော့ အချို့အရာတွေ စွန့်လွှတ်ရမှာပေါ့။ အခုတောင် ဗိုက်ကြီးမလားမသိဘူး။ ကြီးနိုင်ပါတယ်လေ.သူ့အရည်တွေကတခါထည့်ရင်အများကြီးပဲကို…ဟွန့်..လူဆိုးကြီး……နှင်းကိုအတင်းကျင့်တာ……ဟားဟားဟားဟား…..မရယ်နဲ့ရှင့် ..သူ့ကြောင့်နှင်းမှာရူးရမတတ်ပဲ။ နှင်းကိုထားမသွားပါနဲ့နော်.. ကဲပါ….ကိုယ်မေးတာလဲဖြေပါဦးကိုယ့်အချစ်ကိုလက်ခံမလား……ဟင်မေးစရာလိုသေးလို့လားရှင်ရယ်….နှင်းမှာအားကိုးစရာသူပဲရှိတာ … ဟား………တကယ်လားနှင်း…အင်းပေါ့……ကိုယ့်အချစ်တွေကိုလက်ခံပါပြီနော်…ကိုကို……ပြောလေနှင်းနှင်းတို့ဖူးစာကဆန်းပြားတယ်နော် ချစ်သူကိုထောင်ချတဲ့သူနဲ့ချစ်သူကိုပြန်ပြီးကလဲ့စားချေအတင်းကျင့်တဲ့သူနဲ့……ကျေလိုက်ပါနော်…..နှင်းလေ….ကိုကို ကိုချစ်မိနေပါပြီရှင်ကိုကိုပစ်သွားခဲ့ရင် နှင်း ရူးရမှာပါ။နှင်းရယ်..
အဲလိုနဲ့ ကျုပ်နဲ့မာနခဲတရားသူကြီးမလေးတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျုပ်အပေါ်အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ ကျုပ်လဲအဆက်အသွယ်တခုကြောင့် ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တာအတော်လေးအောင်မြင်လာတယ်။နေ့တိုင်းလိုလိုပဲကျုပ်နှင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ကျုပ်အပေါ်ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲချွဲနွဲ့တယ်။ကျုပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနေပေးတယ်။ကျုပ်ကတချီပြီးရင်သူသုံးချီပြီးတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုကျုပ်လိုးလာလိုက်တာနှစ်လကျော်သွားပြီ။ကျုပ်လိုးသမျှသုတ်ရည်ကိုသားအိမ်ထဲပဲသွင်းဖြစ်တာပေါ့။ ကလေးယူမယ်လေ။
ကျုပ်လာရင်အိမ်ဖော်ကလေးမလေးကရှောင်ပေးရတယ် ။ ကျုပ်တို့ချစ်ရည်လူးကြတာပေါ့ ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှကြတယ်။ကလေးကတော့ စပြီးမုဒိမ်းကျင့်ထဲကရနေလောက်မှာပါ။ ကလေးရမှာအသေအချာပဲ။လီးတဆုံးသားအိမ်ထဲအထိရောက်အောင်သွင်းပြီးမှသုတ်ရည်ပန်းထည့်တာဆိုတော့လေ။ တစ်ရက်မှာပေါ့ ကျုပ်တို့လိုးနေရင်းနဲ့ အတင်းကုန်းထ ကျုပ်ကိုအတင်းတွန်းထုတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲပြေးဝင်သွားတယ်။
အေ့…..အော့….ဝေါ့…ဝေါ့….အော့အင်း…အ့….အေ့…အာ့…ဂေါ ..ထွီ……အင်း……အင်း…….ဟင်း…ဟင်းနှင်း….ရှင်…သက်သာရဲ့လား အရမ်းအန်ချင်နေတယ်….အော့ဝေါ့မူးနောက်နောက်နဲ့…. တမျိုးကြီးပဲအေ့….ဝေါ…..အီးအင်း…..ဒီရက်ထဲအစားလဲမစားချင်ဘူး။ ဗိုက်ကြီးပြီလား မသိဘူး ကိုကို…..အော့…..ဝု……ဖူး….ကျုပ်လဲကြားဖူးသမျှနဲ့ ပြုစုပေးမိတယ် ။ ဪ သူ့နာမည်က ကေသီနှင်းဆီတဲ့ ။
ကျုပ်စိတ်ထဲ ထင့် သွားတယ် ။ ဗိုက်ကြီးပြီနဲ့တူတယ်။ နှင်း…….အဆင်ပြေလား…..သက်သာရဲ့လား……..အင်း……သက်သာပါပြီ… အဲတော်…ခိခိခိခိ…သူဟာကြီးကကြောက်စရာကြီး…အမ်. .အဲ… ဟိုဟဲဟဲ…ကဲပါ…ကိုကိုမပြီးဘူးမလားနှင်းလုပ်ပေးမယ်လေ…..ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲနှင်းရဲ့…လာပါ…ဒီနားတိုးခဲအား….ဟား ….နှင်းရယ်….အ…ပြွတ်……ပလပ်…….ပြွတ်ပြွတ် ….အား နှင်းလေ ကျုပ်လီးကိုစုပ်ပေးနေတာဗျ ။ ကျုပ်လဲ အရမ်းကောင်း လာတယ်…အား…နှင်း ကိုကိုပြီးတော့မယ်…..ဖယ်ဖယ်တော့…..အား….ထွက်ပြီ…ထွက်ပြီ အု…အု….ဝု……အင်း…….အား………..
ကျုပ်ဘယ်လိုမှမတောင့်နိုင်ဘူး။ကျုပ်သုတ်ရည်တွေနှင်းပါးစပ်ထဲပန်းထည့်မိတော့တယ်။နှင်းကလဲတစ်စက်မကျန်သုတ်ရည် တွေကိုအကုန်ရအောင်မျိုချပစ်တယ်။ ကျုပ်ချစ်သူလေးကိုပိုလို့တောင်ချစ်မိသွားတယ်။ နှင်းရယ်…အားနာလိုက်တာ…ဘာလို့ထွေးမထုတ်တာလဲ….ရပါတယ် ကိုကိုရဲ့ နှင်းလဲကိုကို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးချင်တယ်လေ…..အဲဒါကိုကို့ကိုချစ်လို့ပေါ့…အင်း…အဲဒါဆိုမနက်ကျရင် နှင်းကိုဆေးခန်းပြရအောင်….ဟုတ်ကဲ့ကိုကို….ကဲ…နှင်း….မထူးဘူး…ရေချိုးရအောင်…..တကိုယ်လုံးလဲပေပွနေပြီ။မနက်ကျတော့ ဆေးခန်းသွားပြကြတယ်။နှင်းမှာကိုယ်ဝန်နှစ်လကျော်နေပြီ။
ကိုကို……ပြောလေနှင်း……နှင်းဟေို…ဟို…….အရမ်းလိုချင်နေတယ်အမ်….နှင်းမှာမပေါ့မပါးကြီးနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား……ရပါတယ် ကိုကိုရဲ့ ကလေးမထိအောင်တော့ လုပ်ပေးပေါ့……နှင်းအရမ်းခံစားချင်နေပြီ ဗိုက်ကြီးသည်မလေးကို လုပ်ရတဲ့ အရသာကလဲ တမူထူးခြားတယ်ဗျ။အတွင်းသားလေးတွေကနွေးအိစိုနူးနေတာပဲ။ လီးတချက်လိုး သွင်းလိုက်တိုင်းစုပ်ညှစ်ချက်တွေက မသေးဘူး။ကျုပ်လဲ ကိုယ်ဝန်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ အဆုံးမသွင်းရဲဘူး။ ကျုပ်ဖန်တီးထားတာတွေက အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ အား…ကိုကို….ဆောင့်ပါ…အင့်..အင့်အားမရဘူး…..လုပ်ပါ…ထည့်ပါ…..နှင်း အရမ်းလိုချင်နေပြီ…အ..အ…အီး..အင်းပြွတ်…ပြွတ်….စွိ..ဖတ်…ဘတ်ဘတ်…ပြွီအင်း…ဟင်း….ဗြွတ်….ဗြွတ်……ပြစ်ပြစ်အား..ဟား …ကောင်းလိုက်တာ….အင်း….ဟင်း…ဆောင့်ဆောင့် အမလေး …အိ…အိ…အင်း.ဟင်း…ပြီးပြီ…ပြီးပြီ… .အား……ကိုကိုရယ.ဟင်းခိခိ…ခိခိ…..အဟီး……..ကျေနပ်ပြီလား…….ဟုတ် ကိုကို..ကိုကိုရော ပြီးလား…….အင်း….ကိုယ်ဝန်ထိမှာစိုးလို့အားမရဘူး….မပြီးသေးဘူး…အဟီး……..အဲဒါဆို နှင်းလုပ်ပေးမယ်လေ
ဒီလိုနဲ့ နှင်းက ကျုပ်အတွက် သားလေး တစ်ယောက်မွေးပေးတယ် ။ ကလေးမွေးပြီး၄၅ ရက်ရှောင်ရမယ်ဆိုတော အဲဒီရက်အတွင်းနှင်းကကျုပ်ကိုအထူးစပါယ်ရှယ်ပြုစုပေးတယ်။ ကလေးအမေနို့ဆိုတော့အကြီးကြီးတွေပဲ ။ နဂိုထဲက ရင်သားအုံကြီးတဲ့သူဆိုတော့နို့လုံးကြီးတွေက ဟီးနေတာပဲ ။ သားတလှည့်ကျုပ်တလှည့် နို့စို့တာပေါ့ဗျာ။ ဟင်းဟင်းခိခိ……အဟဲ…….ကိုကို သားလေးဖို့မကျန်ပဲနေမယ်နော်…ဟီးကျွန်မတော့လေ..သားနှစ်ယောက်မွေးရသလိုပဲ. .လက်မလည်ဘူး.. တကယ် ဟားဟားဟားဟား….နှင်းနို့ကြီးတွေကစို့လို့ကောင်းတယ်။ အကြီးကြီးတွေပဲ အားရစရာကြီး…..ဟုတ်ပါပြီ…သားဖို့ချန်ထားပါဦး……..ဟီးဟီး. ….ပြွတ်ပြွတ် နှစ်တွေလဲကြာပြီ…..သားလေးလဲလေးနှစ်ကျော်လာပြီ…….ကျုပ်တို့သောင်းကျန်းလို့ နှင်းလဲနောက်ထပ်ဗိုက်ကြီးရပြန်ပြီ။ဒီတခါတော့ မိန်းကလေးတဲ့ဗျာ…… ။ ပြီပါပြီ ။ အားပေးမှုကို ကျးဇူးတင်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်